Nabadaynta Ethiopia & Eritrea, Abiy Axmed iyo Halista Ku Sugan Degdegiisa Badan? Falanqaynta Qalinka Xassan Cumar Hoorri • Oodweynenews.com Oodweyne News Somali News | Oodweynenews.com Oodweyne News Somali News
“Waxaa aan ku heshiinnay in dib loo furo safaaradahii labada dal, in la isu furo shacabka iyo xuduudaha labada dal, in la isweydaarto duulimaadka ganacsiga ee dayuuradaha iyo in Ethiopia si xor ah uga adeegato dekadaha Eritrea,” ayuu sheegay Abiy Axmed isagoo ku ladhay. “Jacaylka ayaa ka awood badan hubka casriga ah, taangiyada iyo gantaalada. Jacaylka oo keliya ayaa lagu hanan karaa quluubta dadka. Maantana, jacayl ayaa ka adeegay, halkan, Asmara.”
“20 sannadood oo colaaddu dhex miranaysay labada dal waxaa aan ka dheefnay welwel,” ayuu tibaaxay Abiy Axmed isagoo ku ladhay, “waxaa loo baahan yahay awoodeenna in aan u jeedinno dhanka nabadda, dib-u-heshiisiinta iyo in aan ka dhex muquuranno colaadda iyo kala qaybsanaanta. Weliba in aan diiradda saarno sidii xididada aan ugu siibi lahayn saboolnimada.” Waxaana uu carrabka ku dhuftay “walaaltinimada” iyo “wada dhalashada” ka dhexaysa labada shacab isagoo hoosta ka xarriiqay in uu u hanweyn yahay iskaashi dhaqaale oo dhex mara Asmara iyo Addis Ababa.
“Tallaabo kasta oo uu si degdeg ah u qaaday shacabku aad ayay ugu naaloodeen,” ayuu sheegay Awol Allo, oo u dhashay Ethiopia sharcigana (law) ka dhiga jaamicadaha Britain. Balse, waxaa uu walaac ka muujiyay degdega uu ku socdo isbedelku.
“Waxaa aan ka welwelsan ahay sida degdega ah ee uu isbedelka u boobsiinayo iyadoo dalka aanay ka jirin hay’ado dimuqraadi ah oo difaaca siyaasadiisa iyo waxqabadkiisa horusocodka ah.” “Dadku waxaa ay u barteen nidaam jiitama kasoo wax kastoo dib-u-dhac ah dusha laga huwiyo shacabka,” ayuu hadalkiisa ku soo gunnaanaday Awol Allo.